သက်ငယ် မုဒိမ်းကို ကြီးလေးသည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် တောင်းဆိုနေသည့် ပြည်သူ့အသံကို အစိုးရ နားထေ? - Yangon Media Group
သက်ငယ် မုဒိမ်းကို ကြီးလေးသည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် တောင်းဆိုနေသည့် ပြည်သူ့အသံကို အစိုးရ နားထေ?
သက်ငယ်မုဒိမ်းကိုကြီးလေးသည့်အပြစ် ဒဏ်ချမှတ်ရန် တောင်းဆိုနေသည့် ပြည်သူ့အသံကို အစိုးရနားထောင်သင့်ပြီဟု မတ် ၂၅ ရက်က မြို့တော်ခန်းမရှေ့ရှိ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံတွင် ပြုလုပ်သည့်သက်ငယ်မုဒိမ်း၊ လူသတ်မုဒိမ်းကျူးလွန်ခံရမှုများ မဖြစ်ပွားစေရန်ရည်ရွယ်၍ ပညာ ပေးဟောပြောပွဲတွင် ဟောပြောသူအချို့က ပြောကြားခဲ့သည်။
သက်ငယ်မုဒိမ်း၊ လူသတ်မုဒိမ်း ကျူးလွန်သူများအား ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးရေးအတွက် ယင်းပွဲသို့တက်ရောက်ဟောပြောသူများက တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် စာရေးဆရာမ ဒေါက်တာနိုက်တင် ဂေး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေဘုန်းလတ်၊ ကာတွန်း ဆရာမောင်မောင်ဖောင်တိန်နှင့် ဥပဒေပညာရှင်နှစ်ဦးတက်ရောက် ဟောပြောခဲ့သည်။ ”ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ တောင်းဆိုနေပြီဆိုရင် ဒါဟာလူ့အဖွဲ့အ စည်းမှာ တော်တော်ကြီးနေလို့ပဲ။ ဒါကိုအစိုးရရော လွှတ်တော်က သတိပြုသင့်နေပြီ။ အစိုးရအနေနဲ့လည်း ပြောနေတဲ့သူတွေကလည်း ပြောနေပြီ။ နားထောင်သင့်တဲ့သူကလည်း နားထောင်သင့်ပြီ”ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေဘုန်းလတ်က ပြောသည်။
ကာတွန်းဆရာ မောင်မောင် ဖောင်တိန်က ”ပြောနေတဲ့သူတွေကပြောနေပြီ။ နားထောင်သင့်တဲ့ လူတွေကလည်း နားထောင်သင့်ပြီဆိုတာ ဒါဟာ အစိုးရကိုပြောနေတာ။ ဒီကိစ္စတွေဆူပူနေတာ ကျွန် တော် အမှတ်မမှားရင် နှစ်နှစ်ကျော် လောက်ရှိပြီ။ ဒါကို နိုင်ငံတော်ကလည်း နားထောင်သင့်ပြီ”ဟု ယင်း ဟောပြောပွဲ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းပညာပေးဟောပြောပွဲကို သက်ငယ်မုဒိမ်းကျူးလွန်မှုရပ် (Stop Child Sexual Abuse)အဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Stop Child Sexual Abuse အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးကိုကိုနိုင်က ”ကျွန် တော်တို့ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပြီး ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့လေးပါ။ တစ်ပတ် လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ကလေးငယ်တွေ အထူးသဖြင့် အသက်လည်း သေစေတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါလည်း ဆုံးရှုံးကြရတယ်။ ပြောရရင်ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်အညွှန့်ကျိုးတယ်။ ဒါ တွေကိုမဖြစ်ပွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကျင်းပတာပါ။ ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း ဒီလိုပွဲတွေကိုပြည်သူ့လူထုကြားထဲများများလုပ်သွားမှာပါ”ဟု ဒီ မိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၂၅ ရက် ကပြောသည်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ် အေးမင်းသန့်က”ကလေးသူငယ် တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေတွေရှိ တယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာက ဥပဒေအပိုင်းတော် တော်လေးအားနည်းနေတယ်။ ဆို တော့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုခုတော့ ချမှတ်ဖို့လိုနေပြီ”ဟု ယင်းပွဲ၌ပြောသည်။
သစ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ သစ်ကုန်ကြမ်း ရရှိမှု အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပို့ဆောင်မည့် တရားမဝင် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာနိုက် သံပုံး ၆ဝ ဖမ်း??
OMNI FOCUS ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးကျော်နေဝင်းနှင့် ဦးဇွဲနေဝင်းတို့အား အရေးယူပေးရန် ဦးတိုက် လျှောက??
ထိုင်းတွင် ဘုရင်အသစ်၏ ပုံဖြင့် ငွေစက္ကူ ထုတ်ဝေမည်
၂ဝဝ၅ တွင် အက်စ်ပန်ညိုသို့ မက်ဆီ ရောက်ရန် နီးစပ်ခဲ့ဟု ပိုချက်တီနီုဖွင့်ဟ၊ ဘာစီလိုနာနှင့် ကစ?